Okpukpe ọhụrụ nke Japanese na ọdịnala pere mpe - WRSP
Japan nwere ọdịbendị dị mgbagwoju anya nke ọdịnala okpukpe na nke saịtị okpukpe. N'ikwu okwu banyere akụkọ ihe mere eme, ọdịnala okpukpe bụ isi nke Shinto na Buddha - ọdịnala nke jikọrọ ibe ha, na-emetụta ma na-emegiderịta ibe ha n'ime ọtụtụ narị afọ ma mepụta ọtụtụ ụdị na ngalaba ịrọ òtù. A na-egosipụtakarị ndị a dị ka 'isi okpukpe' na Japan ma bụrụ ndị a na-ahụkarị n'okpukpe na mba ahụ na ọtụtụ ụlọ arụsị Buddha na ụlọ arụsị Shinto na mba ahụ. Ha jikọtara ya na omume ọdịnala, dịka emume olili ozu na ịga ebe ndị a na-eme kwa afọ iji kpee ekpere maka ọdịmma na mmalite afọ.
Ọ bụ ezie na ọdịnala ndị a bụ akụkụ ndị a kasị akọwapụta nke ebe okpukpe okpukpe Japan dị, agụmakwụkwọ na akwụkwọ ọgụgụ zuru oke banyere Japan, ha bụ nanị akụkụ nke okpukpe ndị ka ukwuu na-agụnye ụdị dịgasị iche iche na ụlọ ọrụ nhazi na nke ahụ, mgbe ọ na-adọtakarị mmetụta sitere na omenala ndị ahụ, na-eguzo na ha. Ihe ha na-emekarị bụ na, n'adịghị ka Shinto na Buddha, bụ ndị a na-ahaziri na omenala na-arụ ọrụ site na ndị nchụàjà a họpụtara ahọpụta, ndị na-arụ ọrụ na-arụ ọrụ ma na-arụ ọrụ dị ka ihe na-eme ka ndị mmadụ.
Ihe kacha dị ịtụnanya n'ụdị okwu a bụ 'okpukperechi ọhụrụ' ndị Japan (Japanese: shinshūkyō 新 宗教). Ndị a bụ mmegharị nke mepụtara na Japan kemgbe mmalite narị afọ nke iri na itoolu - oge nke Japan gbanwere site na ọchịchị ndị ọchịchị na-achị ụwa. N'ịbụ ndị na-enweta nkwado nke ọtụtụ nde ndị Japan, ma ndị ọkachamara na ndị mgbasa ozi na-akatọ ya, na ọtụtụ ndị na-enyocha ma na-aga n'ihu n'oge a, mmegharị dị otú ahụ bụ mmepe okpukpe kachasị mma na Japan n'oge a. Ebumnuche site na ndị mmụọ nsọ na-ekwu na ha na-ejikọta aka na ọnọdụ ime mmụọ, na-enye nzọpụta, ọgwụgwọ na uru ndị ọzọ, ha arụwo ọrụ nke onwe ha ma nyefee okpukpe ọzọ dịka ihe isi ike. Ụfọdụ n'ime okpukpe ndị ọhụrụ, kwa, abawanyewo na mba ọzọ ma nwee ihe ndị dị gburugburu ụwa; ụfọdụ enwetawo ebe obibi ndọrọ ndọrọ ọchịchị na Japan, ebe ndị ọzọ enweela ọhụụ ma dọta ha
N'ime Mmemme Pụrụ Iche anyị na-enye profaịlụ nke ọtụtụ okpukpe ọhụrụ na, n'ihi nha ha, akụkọ ihe mere eme, ike na ihe omume ha, bụ ndị amaara ama na ọnọdụ ndị Japan. Okwu mmeghe, ” Okpukpe ọhụrụ nke Japan: Nchịkọta ”Na-enyocha ụkpụrụ okpukpe ọhụrụ n'ozuzu ha ma na-atụle uru mmegharị ndị a bara ma n'otu n'otu ma n'otu n'otu. Ihe nke abụọ anyị lekwasịrị anya bụ n'òtù okpukpe ndị ọzọ dị n'etiti ndị na-enye ụzọ ọzọ ịgbaso na okwukwe na isi. N'abụghị nke ọma n'ọmụmụ banyere okpukperechi na Japan, ụdị otu a na mmegharị bụ ọdịnala 'obere', na ha anaghị enwe nnukwu nsonazụ ma bụrụkwa na ha ga-ejedebe na mpaghara ụfọdụ, mana ha bụ ihe dị mkpa na mbara ala, yana ịbịaru Na-elebara ndị a anya, anyị nwere olile anya ịgbasawanye ihe ọmụma banyere ụwa okpukperechi ndị Japan.
NDỊ JAPANESE BỤ N'ỤLỌ NCHE A
"Okpukpe ọhụrụ nke Japan: Nchịkọta"
Ian Reader, Erica Baffelli,, na Birgit Staemmler, Ndị Japan Nduzi Ọhụrụ
** A na-eji ihe ikike na-ese onyinyo a na-ewepụtara ya na Photo Archives nke Ụlọ Nanzan Institute for Religion and Culture, Nagoya, Japan. "